Somaliland: Wasaarada Khayraadka Biyaha Somaliland Oo La Wareegtay Gaadhi Noociisu Yahay Gawaadhida Waa Wayn Ee Wiish-ka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasaarada Khayraadka Biyaha Somaliland Oo La Wareegtay Gaadhi Noociisu Yahay Gawaadhida...
Wasaarada khayraadka biyaha somaliland ayaa la wareegtay gaadhi noociisu yahay gawaadhida waa wayn ee loo yaqaano “Wiish”oo ay ha’yada Care ugu deeqday.
Waxaaa munaasibad lagula kala waregayay gaadhiga oo ka qabsoontay dhismaha cusub ee loo dhisay wasaarada kasoo qayb galay wasiirka wasaarada khayraadka iyo biyaha somaliland, wasiiru dawlaha,madaxda sare ee hay’ada Care Internation iyo maamulka gobolka maroodijeex.
Waxaana gaadhigan ay hay’ada Care ugu deeqday wasaarada uu kaalin wayn ka qaadan doonaa hawlaha lagu soo saarayo biyaha dalka.
Waxaana munaasibadaasi intii ay socotay hadalo kala duwan kasoo jeediyay wasiirka wasaarada biyha somaliland, gudoomiyaha gobolka maroodi-jeex, madaxa sare ee hay’adda Care iyo waliba marti sharaf kale waxaana ay dhamaantod sheegeen inay ka shaqayn doonaan sidi ay biyo ku filan u heli lahaayeen xaafadaha ku yaala magaalada hargeysa, sidoo kalena waxay sheegeen inuu gaadhigani wax wayn ka tari doono hawlaha lagu soo saarayo biyaha.
gaba gabadiina madaxa sare ee hay’adda Care waxa uu furihii gaadhigaasi ku wareejiyay wasiirka wasaarada khayraadka biyaha.
wasaarada Khayraadka JSL